Amanqaku ka-AJ Kieffer malunga Martech Zone |
Amanqaku ngu UAJ Kieffer
Sikubudala beenkcukacha ezigcweleyo kakhulu. Ngokuhamba rhoqo kwedatha, nkqu nomthengisi wentengiso yedijithali unokuziva onwabile. Awudingi mpendulo kuyo yonke imibuzo-ufuna nje isitshixo sokuvula ixabiso kwiiphulo nakwiinkqubo zakho. Ufuna inkonzo eyenzelwe wena, ifikeleleke kwaye isebenze ngokufanelekileyo. Ukwazisa ngeendlela ezintsha zokuKhangela kunye nokwabelana ngolwazi kunye namathuba kwiConductor Searchlight Conductor ityhila uluhlu olutsha lweempawu zethu